यसकारण नेकपा प्रवेश गरिन् नेपाली काँग्रेसकी पुर्व सांसद कौसर शाह(भिडियो बार्ता)... - सुनाखरी न्युज
Posted on: December 14, 2020 - 12:00 pm
कौसर शाह/महिला नेतृ –
नेपाली कँग्रेसकी पुर्व सांसद एवं मुश्लिम नेतृ कौसर शाह एकाएक नेपाल कम्युििष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेकी छन् । काँग्रेसमा रहेर लामो समय काम गरेको मात्र नभई लाभका पदसमेत थुप्रै प्राप्त गरिसकेकी पुर्व सांसद शाह एकाएक नेकपामा प्रवेश गर्नुलाई निकै रहस्यकासाथ हेरिएको छ । उनलाई आफूले यतिलामो संघर्ष गरेको पार्टि छाडेर कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेशगर्नुपर्ने कारण के रह्यो र उनले कम्युनिष्ट पार्टीमा काँग्रेसकोमा भन्दा बढी के पाइन ? यो अहिलेको चासो र चचाएको बिषय छ । यसै प्रसङगमा काँग्रेसकी पुर्व सांसद कौसर शाह जो हालैमात्रै नेकपामा प्रवेश गरेकी छन्, उनीसँग सुनाखरीन्युज (www.sunakharinews.com) कालागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः
लामो समय काँग्रेस पार्टीमा रहेर संघर्ष गर्नुभएको मान्छे एकाएक काँग्रेस छाड्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । किन ?
काँग्रेस पार्टिसँग मलाई कुनै गुनासो छैन । केवल मलाई काँग्रेसको नेतृत्व सँग गुनासो छ । काँग्रेसको नेतृत्व असक्षम, अलोकतान्त्रिक र सुस्त विचार छ । त्यसैले उहाँको नेतृत्वमा वसिरहन ठीक नलागेर मैले पार्टी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरें ।
नेतृत्व भनेर कसलाई सँकेत गर्न खोज्नु भएको हो ? पार्टि सभापतिलाई हो ?
हो । उहाँ (शेर बहादुर देउवा) असक्षम हुनुहुन्छ । अलोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टिलाई राम्रोसँग नेतृत्वगर्न सक्नुभएको छैन । उहाँले सवैलाई पार्टिमा समेट्न सक्नुभएको छैन । उहाँले पार्टिलाई गुण्डा पाराले चलाउनुभएको छ । उहाँ विचार विहिन र सहयोग एवं सद्भाव विहिन भएकै कारण मैले पार्टी छाडेको हुँ । उहाँले मैले पार्टीमा गरेको योदानको कुनै कदर गर्नुभएन । उहाँको कार्यकालमा कुनै अवसर पनि दिनुभएन । तसर्थ मैले उहाँको नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा वसिरहन उपयुक्त ठानिँन ।
तपाइँलाई काँग्रेसले अहिलेसम्म केही दिएन र एकाएक यसरी आक्रोस ब्यक्त गर्नुभएको ?
मलाई पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय शुशिल कोइरालाले पार्टीमा सेवागर्ने अवसर दिनुभएको हो । पछि मैले शेर बहादुर देउवा जीलाई पनि सहयोग गरें । महाधिवेशनमा पनि धेरै सहयोग गरे । तर उहाँले त्यो गुन पनि देख्नु भएन । त्यसले मलाई उहाँप्रति वितृष्णा जागेको हो ।
काँग्रेस पार्टी त्यागेर नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो । तपाइँको नेकपाप्रतिको मोह के हो ?
हिजोसम्म यो देशमा कसैको पहिचान थिएन । तर अहिले सवैको पहिचान हुन थालेको छ । समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त लागु भएको छ । धर्मनिरपेक्ष प्रणाली लागु भएको छ । महिलाकालगि ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ । त्यो कम्युनिष्टहरुकै देनले हो ।
जातिय कुरा गर्न खोजेको त होइन । तर मुश्लिम नारी भएकोले हिन्दु राज्यको विपक्षमा त तपाइँ लाग्नु भएको होइन नि ?
यसमा सवैको अधिकार छ । लोकतान्त्रिक संविधान वनिसकेको छ । धर्म निरपेक्ष देश हो । म मुश्लिम हो तर म सवै धर्मको सम्मान गर्दछु । जहाँसम्म अहिले उठेका कुरा नेताहरुले आफ्नो कुर्सीकालागि धर्मको कुरा उठाएका छन् । राजनीतिलाई धर्मसँग जोडेर आफ्नो कुर्सी वचाउन खोजेका छन् ।
हुलमुल सहित नै नेकपा प्रवेश गर्नुभयो ? के पार्टीसँग के माग्नु भएको छ र के पाउनुभयो ?
आन्तरिक सम्झौता त केही भएको छैन । मलाई पुर्व प्रधानमन्त्री द्धय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लगायतले टिका लगाएरु पार्टी प्रवेश गराउनुभएको छ । मेरो पार्टीमा धेरै नेताहरुसँग राम्रो सम्वन्ध नै छ । उहाँहरुले तपाँँको हैसियत अनुसार तपाइँलाई स्थान दिन्छौं भन्नु भएको छ ।
पार्टीवाट ठूलै आशा गर्नुभएको छ ?
मैले पार्टिकोलागि र देशकोलागि काम गर्दै जाने हो । अहिले नै यो र त्यो आशा गरेको भन्ने कुार होइन । म पार्टी र जनताकालागि काम गर्ने मान्छे हो । म पार्टिमा रहेर कर्म गर्छु । कर्मको फलत मिल्छ नै । यसका पार्टी र जनताको निर्णय नै मेरालागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाइँको काँग्रेसी स्वभाव अव कम्युनिष्ट स्वभावमा मिल्ला ?
काँग्रेस लोकतान्त्र मान्ने पार्टी हो । लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको छ । तर त्यो ब्यवहारमा देखिएको छैन । नेताको चाहना अनुसार चल्दै आएको छ । कम्युनिष्टको जनवाद जनतासँग हातेमालो गर्दै हातेमालो गर्दै यसलाई ब्यवहारमा उतार्ने हो । यसर्थ स्वभाव नमिल्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।
अन्त्यमा, अवको भविष्य काँग्रेससको हो नेकपाले केहीगर्न सकेन भन्ने बिश्लेषण हुन थालेको छ । तर तपाइँ यहीवेला पार्टी फेर्नुभयो ?
होइन । अव काँग्रेसको भविष्य छैन । सरकारलाई भ्रष्टाचारी भन्छ, तर आफैं त्यसमा सहभागी भएर हिँड्छ । उ सँग कुनै योजना र दृष्टिकोण पनि छैन । नेतृत्ववर्गले जनताकालागि केहीगर्न सकेन । त्यसैले अव काँग्रेसको दिन सकीयो भन्ने मलाई लाग्छ । फेरी अर्कोकुरा काँग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले केही गर्न सक्नुभएन । उहाँले रामचन्द्र पौडेल लगायतलाई समेटेर ल मिलेर अगाडि बढौं, तपाइँहरु पदमा वस्नुस । म धेरै पटक पार्टीको प्रधानमन्त्री र सभापति पनि वनिसकेको छु । अव वाहिर वस्छु भन्न पनि सक्नुभएन ।उहाँले विपीको विचारलाई पार्टीको सिद्धान्त वनाएर अगाडि बढ्न सक्नु भएन । त्यतिगर्न सकेको भए उहाँकै इज्जत बढ्ने थियो । तर उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएन ।यसर्थ उहाँको नेतृत्व गरेको पार्टीमा वसिरहनु ठीक लागेन ।
हेरों महिलानेतृ शाहसँगको भिडियो बार्ताः